Dagaallada Beledweyne oo dhaliyay barakac
Dagaallo 24-kii saac ee la soo dhaafay ka soconayay Beledweyne ayaa ku qasbay dadkii degaanaa inay magaaladaasi ka qaxaan.
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in magaaladaasi ay ka qaxeen badi dadkii ku noolaa kadib dagaallo qaraar oo 24-kii saac ee la soo dhaafay ka dhacayey gudaha iyo agagaarka magaalada.
Wararku waxay sheegayaan in weerar ay shalay qaadeen ciidamada Al-Shabab iyo Xisbul Islaam oo is garabsanaya uu sababay in la isla soo galo gudaha magaalada. Mar kale ayey maanta magaaladu u gacan gashay xoogagga Al-Shabab iyo Xisbul Islaam.
Ugu yaraan shan qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalladan. Mas’uul u hadlay ururka Xisbul Islaamna waxa uu qirtay inay mas’uul ka ahaayeen laba qof oo ka mid ahaa dadka dhintay oo qoorta laga gooyey.
Warbixinta barakaca Beledweyne qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso.